Google sy Fitbit handefasana fitafiana azo refesina amin'ny fahamarinana kokoa. Androidsis
Eder Ferreño | | Ataovy miavaka ny Android, SmartWatch
Ho avy ny fiaraha-miasa mahaliana. Hatramin'ny nanambaran'i Google sy i Fitbit fa hiara-hiasa amin'ny tsenan'ny akanjo azo ampiasaina izy ireo. Ireo orinasa roa dia te-hanatsara na hamolavola rafitra vaovao handrefesana ny fiasa ara-batana sy ny fahasalamana. Ho fanampin'ny faniriana hanatsara ny fifandraisana misy eo amin'ny fitaovana azo akanjo sy ny fahasalamana. Noho izany dia miketrika ny drafitra.
Ity vaovao ity dia toa nahomby tamin'ny orinasa roa, izay nisondrotra be teo amin'ny tsenan-tahiry vokatr'izany. Ankoatry ny fampanantenany ho mpanova lalao lehibe eo amin'ny tsenan'ny akanjo, izay mety ho fisondrotana goavana ho an'ny Google sy ny Fitbit.
Ny tadiavin'izy ireo dia ny azo anaovana akanjo apetraka, famantaranandro io na fehin-tànana, mahazo vaovao izay alefa mivantana any amin'ny hopitaly na dokotera mpampiasa. Mba hahafahana manara-maso ny fahasalaman'io olona io avy amin'ny tobim-pahasalamana.
Raha fintinina, Google sy Fitbit dia maniry amin'ity fomba ity fa ny dokotera na ny tobim-pitsaboana dia manana fampahalalana marary tsara kokoa sy azo antoka kokoa. Mba hahafantaran'izy ireo bebe kokoa ny toe-pahasalamany, zavatra iray izay hanampy azy ireo hanome fitsaboana tsara kokoa ho an'ireo marary. Natao ho an'ny tena manokana sy namboarina tamin'ny toe-pahasalamanao. Ho fanampin'izay, mety hanampy amin'ny famaritana aretina mora kokoa koa izany.
Noho izany, hitantsika fa te hanatsara ny sehatry ny fahasalamana amin'ny alàlan'ny akanjo vaovao i Google sy i Fitbit izany dia hahazo fampahalalana bebe kokoa amin'ny mpampiasa. Ho an'ireo orinasa roa ireo dia mety ho fampiroboroboana izany, raha hainy ny manambatra ny fahalalana ny roa tonta.
Noho izany, azontsika atao ny manantena fa misy karazana akanjo azo entina hamelezana ny tsena, azo antoka fa famantaranandro marani-tsaina, noforonin'i Google sy Fitbit. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy voalaza intsony hoe rahoviana no hisy izany. Samy maneho hevitra momba ny drafitra sy ny hetahetany miaraka amin'ity fiaraha-miasa ity ireo orinasa roa ireo. Ka tsy maintsy miandry fotoana kely isika mandra-pahitantsika ny valiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Google sy Fitbit dia hiasa amin'ny fitafy entina mandrefesana ny fahasalaman'ny mpampiasa